Aleo mifampiresaka… fanampenam-bava | NewsMada
Aleo mifampiresaka… fanampenam-bava
Par Taratra sur 12/12/2016
Aleo mifampiresaka, ilaina hatrany ny fifampiresahana, tsy misy vahaolana tsy hita amin’ny fifampiresahana… Tenin’ny mpitondra matetika ireo rehefa te hanamarin-tena, hanao tari-dositra amin’ny olana mitranga, hampangina izay mitaraina sy mitsikera… Inona ary aiza izay vahaolana eo?
Eo, ohatra, ny kolikoly eny anivon’ny Antenimierampirenena, tsy amelana ny Bianco hanadihady ifotony; ny tsy fangaraharan’ny tolotrasam-panjakana tamin’ny Frankofonia, ny fanomezana tany ny vahiny, indrindra ny Sinoa; ny andramena tratra tany Singapour; ny harem-pirenena gaboraraka…
Manginy fotsiny ny amin’ny “Raharaha Anjozorobe“, ny fakana an-keriny tany Toamasina, ny baomba nipoaka teny Mahamasina ny 26 jona, ny “Raharaha Ambohimahamasina“, ny lalàn’ny serasera… Tsy hita mazava izay tena vahaolana na ny marina, fa fihetsehana ivelany sy sarin’ady no betsaka.
Inona no hoe mifampiresaka amin’izany? Fampandriana adrisa, na fanarian-dia, na fampanginana… Atao avokoa ny fomba rehetra amin’izany? Eny, na misy tsy mendrika aza: kolikoly io, na fanomezana toerana arahina tombontsoa mba hanginana ny hoe fifampiresahana?
Rehefa tsy manaiky mangina sy mifitsaka amin’ny karazana fandangolangoana amin’ity hoe fifampiresahana: mandeha ny fampitandremana, fandrahonana, fampitahorana fitsarana sy fonja amin’ny famoronana raharaha na antontan-taratasy tsy marina… ? Na jadona amin’ny tian-kano tsy tian-kano.
Ahiahy tsy ihavanana ihany ireo? Na tombantombana ivelany… Na izany aza, mahafanina sy mahavalalanina ny tsy fisian’ny vahaolana mazava sy hentitra amin’ity hoe tsy misy tsy vitan’ny fifampiresahana. Te hatao ve ny fiaraha-mitady vahaolana sa paipaika sy kajikajy mandeha ila ihany?
Hatreto, tsy mbola re sy hita mazava ny amin’izay hoe fiaraha-midinika eo amin’ny mpitondra sy izay ivelan’ny fitondrana amin’itsy sy iroa. Izay atao any amin’ny mangina sy maizina no tsy fantatra. Sao karazana fanampenam-bava ihany ity hoe fifampiresahana tenenin-dava fa tsy atao?